Ụlọ nrụpụta ọkụ eletrik | Ndị na -emepụta na ndị na -ebubata ọkụ eletrik China China
LP usoro mkpuchi mkpuchi ịkpọpu njikọ
Oghere nduzi dị mma
Ugbu A Nọ
Ọnụ ọgụgụ Bolt
Main Line Nkebi (mm ')
Ngalaba Line Branch (mm ')
LP41 JJC-1 Afọ 1.5-35 1.5-10
LP2-150 JJC-4 Afọ 50-150 6-35 (50)
LP4-150 JJC-6 Afọ 50-150 Afọ 50-150
LP6 JJC-7 Afọ 120-240 Afọ 25-120
LP7 Afọ 150-240 10-25
NXZ 240 JJC-8 95-240 95-240
LP400 LP9 Afọ 120-400 95-240
Daalụ maka nghọta gị.General nke mkpuchi mkpuchi ihe njikọ
Njikọ njikọta, nrụnye dị mfe, ekwesịghị iyipụ uwe mkpuchi USB;
Obere oge, nrụgide ịkpọpu ihe na -agbanwe agbanwe, dobe njikọ eletrik dị mma ma ghara imebi ihe ọ bụla na -edu ndú;
Ebube nke onwe, mmiri mmiriihe akaebe, waterproof, na mgbochi corrosion, gbatịkwuo ndụ onye ndu nke njikọ na njikọ;
Mbadamba ụrọ njikọ pụrụ iche emetụtara na njikọ Cu (Al) na Al;
Obere nkwụnye njikọ eletriki, ike mkpali nwere ike iru 15KA;
Ahụ ihe mkpuchi pụrụ iche, iguzogide ọkụ na ịka nká nke gburugburu, ike mkpuchi nwere ike ruo 6KV.
Nrụpụta elu arc, tinye aka na njikọ ya na otu (dayameta), obosara njikọ (l.5-240m㎡).
Daalụ nke ukwuuNnwale arụmọrụ
Arụ ọrụ igwe: ike gri nke ihe nkedo waya bụ 1/10 buru ibu karịa ike nkwụsị nke ndu. Ọ kwekọrọ na GB2314-1997;
Omume ịrị elu nke okpomọkụ: Lunder ọnọdụ nke nnukwu ugbu a, ịrị elu okpomọkụ nke njikọ dị obere karịa nke njikọ njikọ;
Arụ ọrụ okirikiri ọkụ: ugboro 200 kwa nkeji, 100A/m㎡ nnukwu ugbu a, oke ibu, mgbanwe nke nguzogide njikọta erughị 5%;
Arụ ọrụ mkpuchi mmiri: n'okpuru ọnọdụ S02 na igwe nnu, ọ nwere ike mee ugboro atọ nke ule gburugburu ụbọchị iri na anọ;
Arụ ọrụ ịka nká na gburugburu ebe obibi: n'okpuru ọnọdụ nke ultraviolet. izu.
A na m atụ anya mmụba nke mkpụrụ obi.IPC)/Ebumnuche nke ikpuchi mkpuchi mkpuchi ihe njikọta (IPC)
l Ntinye dị mfe
Nwere ike bụrụ alaka ụlọ ọrụ na -enweghị eriri na -enweghị mkpuchi mkpuchi yana njikọ ya kpamkpam, mee brance na ọnọdụ enweghị eriri nke na -enweghị akwapụ
eriri isi, nrụnye dị mfe na ntụkwasị obi, naanị mkpa mkpịsị aka aka, enwere ike itinye ya na ahịrị dị ndụ;
l Nchekwa ojiji
Njikọ ahụ nwere nguzogide dị mma na -agbagọ agbagọ, ọkụ ala ọma jijiji, corrosion electrochemical na ịka nká, ọ nweghị mkpa mmezi, ejirila ya nke ọma maka afọ 30;
l Ọnụ ego
Obere oghere nrụnye na -echekwa ọnụ ahịa àkwà mmiri na ihe owuwu ala Na ngwa nhazi, ọ dịghị igbe igbe njikọta na waya nkwụghachi nke eriri.
chekwaa ọnụ ahịa USB, ọnụ ahịa nke eriri na clamps dị ala karịa sistemụ ike ọkụ ndị ọzọ.
Mkpuchi mkpuchi ihe njikọ PC-150
Njikọ njikọ mkpuchi mkpuchi JBD dị maka eriri ikuku ikuku dị ala. A na-eji njikọ ndị a iji guzobe njikọ T na njikọta njikọta. Ejikọtara njikọ nke ahịrị bụ site na ịkpọpu mkpuchi na -enweghị ibepu mkpuchi. A na -eguzobe njikọ nke eriri mgbata site na itinye onye na -eduzi mgbata n'ime oghere mgbe ịpụsịrị mkpuchi. A na -etinye ihe mkpuchi isi maka njikọ abụọ ahụ.
Mkpuchi mkpuchi ihe njikọ DP10
Nkọwa: Njikọ njikọ mkpuchi mkpuchi na-adabara ụdị ụdị ndị na-eduzi LV-ABC yana njikọ na sistemụ ahịrị ọrụ, na-ewu sistemụ eletriki na sistemụ ọkụ n'okporo ụzọ. Enwere ike ịme njikọ njikọ mkpuchi mkpuchi ngwa ngwa site na ịgbachi bolts iji mee ka ezé banye na mkpuchi nke ahịrị na eriri eriri n'otu oge. A na -ezere mkpuchi mkpuchi maka ahịrị abụọ ahụ.
Mkpuchi mkpuchi ihe njikọ CPA
Isi ahịrị: eriri aluminom kpuchiri
Line Kpatụ eriri: eriri aluminom kpuchiri ma ọ bụ eriri ọla kọpa
A na -akpụzi ahụ site na ihe siri ike na ihu igwe
Bol Mkpuchi isi ịkwa osisi pụrụ iche nke ọma na -enye ohere nrụnye nke ọma n'okpuru iyi mkpachapụ anya nke na -ahụ na ezé kọntaktị na -abanye n'ime onye na -eduzi ya n'emebighị ike igwe nke onye na -eduzi ya.